Ukulawulwa Kwe-MCU - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Amabhodi Wokulawula we-MCU
I-MCU njengengxenye eyinhloko ye-IOT, yathuthukiswa ngokushesha eminyakeni yamuva.
Ibhodi yokulawula ye-MCU, enegama eligcwele le-Micro Controller Unit, ingahlanganisa i-chip esuselwe kwisilawuli esincane, ezinye izinto ze-elekthronikhi ne-PCB ehlanganisiwe ukulawula amasekethe angaphandle. Ngokuya ngezici zokukala nokulawulwa kwezinto zezimboni, imvelo, kanye ne-interface, ibhodi lokulawula le-MCU liqonde emsebenzini wokwenza imali, ukwenza ngcono ukuthembeka emvelweni yezimboni, nokwakha isikhombimsebenzisi esibonakalayo sohlelo lwekhompiyutha yohlelo ngokuguquguqukayo nangokuzikhandla .
Ukusetshenziswa kwamabhodi wokulawula we-MCU:
Imvamisa isetshenziswa kwezinye izilawuli ezilula zezimboni, njengokulinganisa nokulawula uhlelo, imitha ehlakaniphile, imikhiqizo ye-mechatronics, isikhombimsebenzisi esibonakalayo, njll. Futhi i-MCU nayo ingasetshenziswa emikhiqizweni ehlakaniphile yomphakathi, njengemishini yasendlini, amathoyizi, induduzo yemidlalo, i-audiovisual imishini, izikali zikagesi, amarejista wemali, okokusebenza kwehhovisi, okokusebenza kwasekhishini, njll. Ukwethulwa kwe-MCU akugcini nje ngokuthuthukisa kakhulu imisebenzi yemikhiqizo, kuthuthukisa ukusebenza, kepha futhi kufinyelela nomphumela wokuSebenzisa.
Umgomo wamabhodi wokulawula we-MCU:
Konga kakhulu ukusebenzisa ulimi lwe-C noma ezinye izilimi zokulawula ukubhala izinqubo zokwenza isenzo ukufeza inhloso enkulu yokulawulwa kwezimboni.
Izinto Eziyisisekelo: FR-4
Ubukhulu beCopper: 17.5um-175um (0.5oz-5oz)
Ubukhulu beBhodi: 0.21mm ~ 7.0mm
Ubuncane. Hole Usayizi: 0.10mm
Ubuncane. Ulayini Ububanzi: 3mil
Ubuncane. Isikhala Somugqa: 3 Mil (0.075 Mm)
Ukuqedelwa Kwaphezulu: I-HASL
Izinhla: 1 ~ 32 izingqimba
Ukubekezelelana kweHole: PTH: ± 0.076mm, NTPH: ± 0.05mm
Umbala wesolder Solder: Okuluhlaza / oMhlophe / omnyama / oBomvu / Ophuzi / oBlue
Umbala weSilkscreen: Mhlophe / Mnyama / Mphuzi / Luhlaza okwesibhakabhaka
Izinga eliyisethenjwa: IPC-A-600G Isigaba 2, Isigaba 3
Umehluko phakathi kwe-MCU ne-PLD:
(1) I-MCU ilawula amadivayisi wangaphandle ukuthi asebenze ngokushintsha izinga letheku le-I / O ngohlelo; I-PLD ukuguqula ukwakheka kwangaphakathi kwe-chip ngohlelo.
(2) I-MCU iyi-chip, kepha ayinakusetshenziswa ngqo; I-PLC ine-interface eyenziwe ngomumo, kulula kakhulu futhi inokwethenjelwa ukuyisebenzisa ngqo endaweni yezimboni, bese uxhuma kusixhumi esibonakalayo somshini womuntu ukulawula okuqondile.
(3) chip ye-MCU ishibhile, futhi isetshenziselwa ukulawula okuzenzakalelayo kwemikhiqizo ye-batch embonini yokukhiqiza; I-PLC ilungele ukulawula okuzenzakalelayo kwezimboni.